DEG DEG: Madaxda Galmudug, K/Galbeed & Hiirshabeele oo safar deg deg ah ku aaday Itoobiya & Sababta – Wanleweyn – Hoyga Wararka Tayeysan – Wararka Soomaaliya
Warar lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in safarka Shariif Xasan, C/kariin Xuseen Guuleed iyo Cali C/llaahi Cosoble uu la xiriiro arrimaha doorashooyinka.
Ilo wareedyo muhiim ah ayaa sheegaya in Madaxweynaha Puntland C/wali Gaas uu ku jiray Madaxda loo yeeray, balse uu cudur daar sameeyay.
Dowladda Itoobiya ayaa dooneysa in Madaxda kala hadasho sidii ay u taageeri lahaayeen Madaxweyne Xasan Sheekh sidii dib loo soo dooran lahaa.
Sidoo kale Madaxweyne Xasan Sheekh iyo Cali C/llaahi Cosoble ayaa iyana ay kala shaki soo kala dhex gashay, kaddib marki xubno qaar oo mucaarad ku ah ay ku soo doorashooyinkii Aqalka Hoose ee lagu soo gaba gabeeyay Jowhar.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa labadii bil ee u dambeeyay tagay Addis Ababa saddex jeer ka badan, waxaana loo arkaa loo arkaa inay tahay dal si aad ah u taageeraya Xasan.
Madaxda Madasha ayaa wali ka soo bixin jadwal rasmi ah, waxaana waxbaaha shirka la isku haayo uu ka mid yahay arrinta Aqalka Sare ee Somaliland oo si gaar ah ay markan isugu hayaan Madaxweynaha Puntland iyo kuxigeenkiisa C/wali Gaas iyo C/xakiin Camey oo labadaba ku sugan Muqdisho.
Previous: Maxaa ka socda Magaalada Boosaaso oo aadan ogeyn?
Next: Puntland oo si yaab leh ugu jawaabtay Culimada Soomaaliyeed (AQRI)